“Xilli ciyaareedka soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ku guuleysto tartamada oo dhan” – Ronaldo – Gool FM
“Xilli ciyaareedka soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ku guuleysto tartamada oo dhan” – Ronaldo
(Italy) 06 Luulyo 2019. 34 jirka reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa ka hadlay rajada uu ka qabo kooxdiisa haatan ee Juventus, kahor inta uusan bilaabanin xili ciyaareedkiisii labaad ee naadiga reer Talyaani.
Ronaldo ayaa ku biiray kooxda Juventus xagaagii 2018, isagoo kaga soo dhaqaaqay Real Madrid aduun lacageed dhan 105 milyan euro.
Xiddiga reer Portugal ayaa kula guuleystay kooxda Juventus horyaalka Serie A iyo Coppa Italia xilli ciyaareedkii hore, balse wuxuu ku guuldareystay inuu kula guuleysto tartanka UEFA Champions League.
Yeelkadeeda, Cristiano Ronaldo ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay rajada uu ka qabo kooxdiisa haatan ee Juventus xili ciyaareedka soo socda wuxuuna yiri:
“Hadafkeyga marwalba waa inaan ku guuleysto koobab, xilli ciyaareedka soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan ku guuleysto tartamada oo dhan”.
Waxaa xusid mudan in Cristiano Ronaldo uu la shaqeyn doono xili ciyaareedka soo aadan, tababaraha cusub ee kooxda Juventus Maurizio Sarri. Iyadoo sidoo kale ay kooxda sameysay saxiixyo cusub ee muhiim ah.